कात्रोले आँसु पुछेर पश्चाताप गर्ने हैन काम्रेड! | परिसंवाद
कात्रोले आँसु पुछेर पश्चाताप गर्ने हैन काम्रेड!
गफाष्टक	 आइतबार, साउन १८, २०७७ मा प्रकाशित
ए झुम्री ! लु लाक्पा र मलाई एक एक डबका जाँड ल्या त ! अनि लाक्पा भन हिजो अस्ति त्यो अनलाइनहर्ले के–के लेख्यो ? नेकपा र काँग्रेसको जात्राको वर्णनन् कसरी गरे । केटाहर्लाई समाचार त फालाफाल भाको छ ।
आ भेना ! तिम्रो केटाहर्ले ओलीको विरुद्धमा लेखेर मजाले पेट पालीरा छ । ओली विरोधी खेमामा रहेका अधिकांश (केन्द्रीय) पत्रकाहर्ले कार किने, घर बनाए, पैसा उठाए थर्काएरै मोज गर्दै छन् । बाठो चैं तिम्रै पक्षको पत्रकार बाठो है भेना !
हौ लाक्पा ! मिशनमा जोडले लागेको छ । तर, के गर्नु ती ओली पनि सतीसाल जस्तो जब्बर रान ! बनमारा नाथेले घेरेर त केही नहुने । दाल गलेन केरे हाम्रो काम्रेडको पनि । ओलीको छेउमा भिजेको मुसा पो बन्न पुगे हाम्रा काम्रेडहरु ।
खुम्चिए, खिइँदै गए । सबै आफ्नाहर्ले छाड्दै गए । पूर्व माओवादीका नेताहरु नै ओलीको पक्षमा बोल्न थालेका छन् । म त चकित बनेको छु ।
के भयो र चकित बनिस् लाक्पा ! लौ जाँड खाउ !
नेकपाको गुट देखेर चकित भएँ । केही दिन अघिसम्म ओलीको चर्को विरोध गर्नेहरु अहिले ओलीको समर्थनमा । हौ दिदी म त तीन छक्क परेको ।
सप्पै कुरो मिल्छ । लास्टाँ गर, हाम्रो प्रचण्ड काम्रेडले सबैलाई थाङ्नामा सुताई दिन्छन् ।
नचाहिएको कुरा नगर बुढा ! खुट्टी देख्दै सबैले पत्याए । ओलीलाई फाल्न कसिएका हर्को बुद्धिको विर्को अलि पछि खुल्छ । ताँइ न तुइँको लफडा निकालेर पार्टीमा हाहाकार भएको देखाउने हर्लाई अब वामदेवले डो¥याउँछन् । पार्टी फुट्यो भने कात्रोले आँसु पुछेर पश्चातप गर्नु बाहेक यिनार्को क्यै बाँकी रहदैन ।
यो झुम्री पनि निकै बाठी छ । तर, हेर ओलीले पनि राम्रो सन्देश चाहिँ छरेनन् है ।
हे… । नकराउ तिमी ! बाघ गर्जिए पछि स्यालको हुँयालाई स्वभाविक मान्न सक्नु पर्छ । खत्तम भयो भनेर ठान्नु हुदैन ।
के तिम्रो ओली चाहिँ बाघ अरु नेता चाहिँ स्याल होर दिदी ?
हो नि ! समय र घटनाहर्ले त्यस्तै देखायो । ‘बहुमत हाम्रो छ’ भनेर ओलीलाई धम्की दिनेहरु अहिले ‘किन चाउरिस मरिच आफ्नै रागले’ भन्ने देखिनस् । पार्टी एकता अरे । एकता हो भने पूर्व माओवादीले आफ्नो कार्यकर्ताको नामावली दिनु पर्दैन ? भा पो दिनु । पार्टी त हावा नै बनाको रछ नि !
लु तँ जान्ने न हो झुम्री ! त्यसताका सप्पै हाम्रै माओवादीको कार्यकर्ता जस्तो लाग्थ्यो । अहिले अमृत बोहोराले कार्यकर्ताको लिष्ट देउ भन्दा पो हाम्रो मान्छे सारै कम देखियो । कतिपय जिल्लामा त सय जना पनि छैन ।
मांसाहारी आन्दोलन जिन्दावाद !
देउवा दाइसंग अनुनय विनय !
हैन हौ भेना । धेरै जिल्लामा त्यस्तै छ तिमार्को । कमसेकम पूर्व एमालेको त ब्यवस्थित त थियो । अनि तिमार्को पार्टी विलय भएपछि अहिले त एमालेको पनि भताभुङ्ग भयो । कार्यताले लेभी पनि तिर्नु पर्दैन, रिनु पनि गर्नु पर्दैन । सप्पै हाम्रा कार्यकर्ता भन्दै पूर्व माओवादीले जस्तै गर्जिएर हिडें भै हाल्यो ।
कस्तो खसालेर कुरो गर्दछस् लाक्पा ! माओवादीकै कारणले अहिले धेरैले बोल्न पाका छन् । नेकपा भन्ने ठूलो पार्टी बन्न पाको छ । गफले चिउरा भिज्दैन बुझिस् ।
खै भेना ! गफले चिउरा भिज्दैन भनौ भने माओवादीले गफैले भिजाएछ भनेर अहिले थाहा हुँदै छ । हुन त त्यसै ताका ओलीले माओवादीलाई ‘खहरे हो, एकछिन उर्लिएर आम्छ, छेउछाउका के–के जाती बगाउँछ, अनि सुक्छ’ भन्थे । हो र’छ ।
त्यति सारो त होइन तर संगठन चै बनाइएन छ भन्ने अहिले खड्किएको छ । हाम्रो नेताहरु पनि सम्पति थुपार्न थाले । ठेक्का पट्टा, सरुवा–बढुवा, नियुक्ति र वर्खास्तीबाट कुस्त आम्दानी गर्न थाली हाले । पार्टी संगठन, कार्यकर्ता कस्ले हेर्ने ? हैन त झुम्री !
केको हुनु ! हुँदै होइन नि ! दिल्लीमा बसेर सानो तामझाम होइन नेताहर्को । बिचरा ! कतिपय कार्यकर्ता त साँच्चै क्रान्ति नै हो कि भनेर झुक्यानमा परेर शहीद पनि भए । चन्दा नदिने शत्रु भए । चन्दा दिने सप्पै मओवादी । बोलीले हो नै जस्तो पार्ने । भारततिरै बसेर बिस्तारवादी भारत विरुद्ध सुरुङ्ग युद्ध भनेको पनि पत्याइयो । एमाले र काँग्रेसका कार्यकर्ता मार्दैमा क्रान्ति सफल भयो अरे । यस्तो पनि हुन्छ ?
तीन हजार आफ्ना सेनालाई ३३ हजार बनाएर सरकार समक्ष भनेको झुठ कुरा प्रचण्ड आफैंले पछि खोले । दिनको सय डलर दिने भनेर हाम्रो माइलाहरु जस्तोलाई पनि भर्ति गराए ।
त्यति मात्र होइन नि दिदी । कानपुर तिरबाट उत्पादित प्रचण्ड पथ कि विचारधारा भनेर धुनधान । भरे फुत्त निस्किए पछि क्रमशं रंग रोगन खुइलिएको स्याल…!
लु यस्तो कुरो नगर । मेरो कन्सिरी तातेर आउँछ ।
हो ठीक भने भेनाले । माओवादी हर्को तात्ने नै कन्सिरी हो सैद्धान्तिक टेको, आर्थिक उन्नतिको पाटो र काम भनेको आवेश, वहकाउ, धम्की आतङ्क र अपराधी मनोवृत्ति नै हो भनेर भिरघरेले अस्ति मात्र ब्याख्या गर्दै थियो ।
चुप लागेर तँ घर जा ! जान्ने भर चाँहिदो नचाहिँदो कुरो गर्छ मुले ।
ल ल जान्छु । लाल सलाम !
कोविड–१९ को कहरः अन्धकार गाउँ, सङ्कटमा सामुदायिक जलविद्युत सम्पत्ति
हिमाली जिल्लामा तत्काल इन्टरनेट सेवा विस्तारमा जोड
नेकपाको कुनै विवरण परिर्वतन, संसोधन वा हेरफेर गर्नु पर्ने…
सगरमाथा आरोही दानुरी शेर्पाको अन्त्यष्टि
अघिल्लो	पछिल्लो 1 of 138